Uru na ọghọm dị na valvụ dị iche iche - China Dịka Valve (Tianjin)
Uru na ọghọm dị na valvụ dị iche iche
1. Ọnụ ụzọ ámá : ọnụ ụzọ ámá na-ezo aka na valvụ nke onye na-emechi emechi (RAM) na-agagharị na ntụziaka vetikal nke ọwa. A na-ejikarị ya eme ihe dị ka ihe na-egbu egbu na pipeline, ya bụ, meghee ma ọ bụ mechie. N'ozuzu, a naghị eji valvụ ọnụ ụzọ dị ka ịhazi usoro. Enwere ike iji ya maka nrụgide okpomọkụ dị ala ma ọ bụ nnukwu okpomọkụ na nrụgide dị elu, enwere ike iji ihe dị iche iche nke valvụ mee ya. Ma a naghị ejikarị valvụ ọnụ ụzọ eme ihe na pipeline na-ebute apịtị na mgbasa ozi ndị ọzọ
Resistance Nguzogide mmiri dị ntakịrị;
② Mgba ọkụ achọrọ maka mmeghe na mmechi dị obere;
A-can Enwere ike iji ya na pipeline netwọọdụ mgbanaka ya na ọkara na-aga n'akụkụ abụọ, ya bụ, usoro ntụgharị nke ọkara adịghị ejedebe;
A-open Mgbe emepere ya kpamkpam, mbuze nke imechi ihe akara site na ịrụ ọrụ dị obere karịa nke nkwụsị valvụ;
Ọdịdị nke ahụ dị mfe na teknụzụ nrụpụta ka mma;
Length Ogologo ihe owuwu ahụ dị mkpụmkpụ.
① Akụkụ mpụga na oghere mmeghe buru ibu, oghere maka ntinye dịkwa nnukwu;
② N'ime usoro mmeghe na mmechi, ebe akara ahụ dị ntakịrị esemokwu, esemokwu ahụ bukwara ibu, ọbụnadị na ọ dị mfe ịkpata ihe abrasion na ọnọdụ dị elu;
③ N'ozuzu, valvụ ụzọ ámá nwere ihe mkpuchi abụọ, nke na-agbakwunye ụfọdụ ihe isi ike na nhazi, ịgha na ndozi;
Opening Oge mmeghe na mmechi dị ogologo.
2. Butterfly valvụ : urukurubụba valvụ bụ a valvụ nke na-eji diski ụdị oghere na-emechi akụkụ na-atụghachi azụ na-apụta ihe 90 Celsius imeghe, mechie na ịgbanwe mmiri ngafe.
A-① Ọ nwere usoro dị mfe, obere olu, obere ọkụ na obere oriri, ma anaghị eji ya na valvụ dị ukwuu;
Opening Mmeghe na mmechi dị ngwa, na nguzogide na-agba agba dị obere;
A-③ Enwere ike iji ya na ọkara ya na ihe mgbochi siri ike kwụsịtụrụ, enwere ike iji ya na ntụ ntụ na mgbasa ozi granular dịka ike nke akara akara. Enwere ike iji ya maka oghere ụzọ abụọ na mmechi nke ikuku na ikuku na-ewepụ ájá, ma jiri ya mee ihe na pipeline gas na ụzọ mmiri nke metallurgy, ụlọ ọrụ ọkụ, ike na usoro mmanụ.
A-regulation Usoro usoro usoro ntụgharị adịghị oke, mgbe oghere ruru 30%, usoro ahụ ga-abanye karịa 95%;
② N'ihi njedebe nke ngwongwo urukurubụba na ihe mkpuchi, ọ gaghị adabara nnukwu okpomọkụ na usoro pipeline dị elu. Igwe ọkụ na-arụ ọrụ n'ozuzu dị n'okpuru 300 ℃ na PN40;
A-performance Ọrụ akara ahụ adịghị mma ma e jiri ya tụnyere valvụ na bọl na-akwụsị, n'ihi ya ọ dịchaghị oke maka akara.
3. Bọọlụ bọl : ọ sitere na plọg plọg ahụ. Akụkụ mmeghe ya na mmechi ya bụ okirikiri, enwere ike mepee ma mechie site na ịgbanye bọọlụ 90 Celsius gburugburu gburugburu nke azuokokoosisi. Ball valvụ na-bụ-eji na pipeline ebipụ, kesaa na-agbanwe eruba direction nke ọkara. The valvụ e mere dị ka V-yiri oghere nwekwara ezi eruba iwu ọrụ.
Resistance Nguzogide na-asọpụta bụ nke kachasị dị ala (n'ezie 0);
A-② Enwere ike iji ya na mmiri mmiri na-ere mmiri na mmiri ọkụ n'ihi na ọ gaghị arapara n'ọrụ (mgbe enweghị mmanu);
③ N'ime ọnọdụ nke nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ, akara akara ahụ nwere ike imezu kpamkpam;
④ Ọ nwere ike ịchọpụta mmeghe na mmechi ngwa ngwa, na mmeghe na mmechi nke oge ụfọdụ bụ naanị 0.05-0.1s, iji hụ na enwere ike iji ya na usoro akpaaka nke bench ule. Mgbe emepere valvụ ma mechie ngwa ngwa, arụ ọrụ enweghị mmetụta;
⑤ Akụkụ mmechi bọọlụ nwere ike ịdị na-akpaghị aka n'akụkụ oke;
⑥ Onye na-arụ ọrụ na-emechi emechi kwenyesiri ike n'akụkụ abụọ;
A-open Mgbe meghere ma mechie kpamkpam, a na-ekewapụ akara akara nke bọọlụ na oche site na ọkara, yabụ onye na-agafe agafe na valvụ na oke ọsọ agaghị ebute mbuze nke akara akara ahụ;
A-⑧ A na-ewere ya dị ka usoro valvụ kachasị nwee ezi uche maka usoro okpomọkụ dị ala dị ala n'ihi usoro nhazi ya na ịdị arọ ya;
A-body Ahụ valvụ ahụ na-eme ka ihe dị mma, karịsịa welded valve body system, nke nwere ike iburu nrụgide site na ọkpọkọ ahụ;
⑩ Akụkụ mmechi nwere ike ịnagide ọdịiche dị elu dị elu mgbe emechi. (11) valvụ bọl nwere ahụ valvụ zuru oke nwere ike lie ya n'okpuru ala, nke na-eme ka valvụ internals na-enweghị mmerụ ahụ, yana ndụ ọrụ kachasị elu nwere ike iru afọ 30, nke bụ valvụ kachasị mma maka mmanụ na pipeline gas.
① Ebe ọ bụ na ihe mkpuchi mgbanaka bụ isi nke oche valvụ bụ polytetrafluoroethylene, ọ na-adọkpụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile kemịkalụ, ma nwee njirimara nke obere esemokwu ọnụ, arụmọrụ kwụsiri ike, ọ naghị adị mfe ịka nká, ọtụtụ ụdị okpomọkụ na arụmọrụ dị mma. Mana ngwongwo anụ ahụ nke polytetrafluoroethylene, gụnyere ọnụọgụ mgbasawanye dị elu, na-enwe mmetụta nke mmiri oyi na arụ ọrụ na-adịghị mma, chọrọ nhazi nke oche oche ka ọ dịrị gburugburu njirimara ndị a. Ya mere, mgbe ihe akàrà ahụ siri ike, a na-ebibi ntụkwasị obi nke akara ahụ. Ọzọkwa, nguzogide okpomọkụ nke polytetrafluoroethylene dị ala, enwere ike iji ya mee ihe n'okpuru ọnọdụ nke na-erughị 180 ℃. N'elu okpomọkụ a, ihe akàrà ahụ ga-aka nká. Mana ịtụle ogologo oge, a ga-eji ya naanị na 120 ℃.
A-performance Nhazi ya dị njọ karịa nke valvụ nkwụsị, karịsịa pneumatic valve (ma ọ bụ valvụ eletrik).
4. Kwụsị valvụ : na-ezo aka na valvụ nke onye na-emechi emechi (diski) na-agagharị n'etiti etiti nke oche ahụ. Dika ngagharị nke diski ahụ, ngbanwe nke oghere valvụ ahụ dabara na ọrịa strok. Ebe ọ bụ na mmeghe ma ọ bụ mmechi mmechi nke valvụ ahụ dị mkpụmkpụ, ọ nwere ọrụ nkwụsịtụ a pụrụ ịdabere na ya, yana n'ihi na mgbanwe nke oghere oche ahụ dabara adaba na ọrịa strok nke diski valvụ ahụ, ọ dabara adaba maka na-achịkwa eruba. Ya mere, ụdị valvụ a na-akpali akpali ịkwado maka ịcha ma ọ bụ ịhazi na ịtụgharị.
① N'ime usoro mmeghe na mmechi, esemokwu dị n'etiti diski na akara akara nke valvụ ahụ dị obere karịa nke ọnụ ụzọ ámá, n'ihi ya ọ na-eguzogide ọgwụ.
Height Ogologo mmeghe bụ naanị 1/4 nke ọwa valvụ, n'ihi ya, ọ dị obere karịa valve ọnụ ụzọ;
③ N'ozuzu, enwere naanị otu akara akara na valvụ ahụ na diski, ya mere, usoro mmepụta ihe ka mma ma dị mfe ilekọta;
④ N'ihi na njuputa bụ ngwakọta nke asbestos na graphite, ọnọdụ okpomọkụ dị elu. N'ozuzu, a na-eji valvụ nkwụsị maka uzuoku.
① Ebe ọ bụ na usoro ntụgharị nke ọkara site na valvụ na-agbanwe, ntakịrị nkwụsi ike nke nkwụsị nkwụsị dị elu karịa nke ọtụtụ ụdị ụdị valves ndị ọzọ;
N'ihi ogologo ọrịa strok, ọsọ mmeghe na-adị nwayọ karịa nke valvụ bọl.
5. Nkwụnye valve : na-ezo aka na valve rotary nke nwere akụkụ mmechi plunger. Site na ntụgharị 90 Celsius, a na-ejikọ ma ọ bụ kewapụ ọdụ ụgbọ mmiri na plọg valvụ na ọdụ ụgbọ mmiri na ahụ valvụ, ka ị wee ghọta mmeghe ma ọ bụ mmechi. Ihe plọg ahụ nwere ike ịdị n’ụdị cylindrical ma ọ bụ conical. Thekpụrụ ahụ yiri nke valvụ bọl. A na-emepụta valvụ bọl na ndabere nke valvụ nkwụnye, nke a na-ejikarị eme ihe maka nrigbu ubi mmanụ na ụlọ ọrụ petrochemical.
6. valvụ nchekwa : ọ na-ezo aka na ngwaọrụ nchebe overpressure na arịa nrụgide, akụrụngwa ma ọ bụ pipeline. Mgbe nrụgide dị na akụrụngwa, arịa ma ọ bụ pipeline na-ebili karịa uru a ga-ekwe ka ọ dịrị, valvụ ahụ ga-emepe na-akpaghị aka wee wepụta n'ọtụtụ zuru ezu iji gbochie akụrụngwa, arịa ma ọ bụ pipeline na nrụgide na-ebili mgbe niile; mgbe nrụgide ahụ rutere na ọnụahịa akọwapụtara, a ga-emechi valvụ na-akpaghị aka na oge iji chebe ọrụ nchekwa nke akụrụngwa, arịa ma ọ bụ pipeline.
7. Steam ọnyà : na ọkara nke uzuoku na ikuku abịakọrọ, a ga-enwe ụfọdụ condensate guzobere. Iji hụ na arụmọrụ na arụmọrụ nke ngwaọrụ ahụ, a ga-ahapụrịrị mgbasa ozi ndị a na-abaghị uru ma na-emerụ ahụ n'oge iji hụ na ojiji na ojiji nke ngwaọrụ ahụ. O nwere ọrụ ndị a: ① ọ nwere ike iwepu ngwa ngwa condensate emepụtara; Igbochi ihipu uzuoku; Air ikuku na-ekpochapu na ikuku ndị ọzọ na-enweghị ihe ọ bụla.
8. Nrụgide na-ebelata valvụ : ọ bụ valvụ nke na-ebelata nrụgide ntinye na nrụgide nrụpụ ụfọdụ achọrọ site na ịhazigharị, ma dabere na ume nke onye na-ajụ onwe ya iji mee ka nrụpụta nkwụsị kwụsị na akpaghị aka.
9. Lelee valvụ : makwaara dị ka valvụ na-agagharị, valvụ ego, valvụ nrụgide azụ na valvụ otu ụzọ. A na-emepe valvụ ndị a na-akpaghị aka site na ike nke usoro ọkpọkọ na-eme n'onwe ya, ọ bụkwa nke valvụ akpaka. A na-eji valvụ elele na sistemụ pipeline, ọrụ ya bụ iji gbochie ịlaghachi azụ, gbochie mgbapụta na ịnya ụgbọ ala ka ọ gbanwee, na nhapu nke ọkpọ. A na-ejikwa valvụ elele iji nye usoro inyeaka na nrụgide karịa nrụgide usoro. Enwere ike ekewa ya n'ime ụdị swing (na-agbagharị dịka etiti ike ndọda) na ụdị ibuli elu (na-agagharị na axis).